မော်လ်ဒိုက် - မီးဖိုချောင်
အဆိုပါမော်လ်ဒိုက်အတွက်အားလပ်ရက် - တစ်ဦးလျှော့ပေါ့ sunbathing, သမုဒ္ဒရာနှင့်အဖြူ၏ azure ရေကိုသာဖြစ်ပါတယ် ကမ်းခြေ ။ ဒါဟာအစတစ်ဦးရှေးဟောင်းကျွန်းနှင့်အတူကျွမ်းဖြစ်ပါသည် အစဉ်အလာ အဖြစ်အမျိုးသားရေးဟင်းလျာများ၏အရသာ။ အတွေ့အကြုံများအတော်လေးပြည့်ကြ၏နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှ, တက gastronomic ပရဒိသုထဲသို့ထိုးရန်လိုအပ်ပါသည် ကျွန်းများ ။
အင်္ဂါရပ်များ Maldivian အစားအစာ
တစ်ခုချင်းစီကိုအစားအစာဒေသခံစားသောက်ဆိုင်, ဒီဇိုင်းပုံမှန်ကြော့ရှင်း, မူရင်း်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်စားသုံးသူများအစာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆျော။ မီးဖိုချောင်မော်လ်ဒိုက်ပု, အချက်အပြုတ်အိန္ဒိယ, ထိုင်းနှင့်တရုတ်အစဉ်အလာကိုပေါင်းစပ်။ အမျိုးသားရေးဟင်းလျာများ၏အများစုဆန်, အမျိုးမျိုးသောနံ့သာမျိုး, အဓိကအားဖြင့်လုပျရနျ, အုန်းသီး, သံပုရာဖျော်ရည်နှင့်ငါးစတော့ရှယ်ယာ (Garuda) တို့ပါဝင်သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောအရသာစားနပ်ရိက္ခာမော်လ်ဒိုက် teluli fiyya ပူးတွဲချက်များ (ကင် crispy ကြက်သွန်) ။
အထူးနေရာအရပ်ကျွန်းများပေါ်တွင်ကြီးထွားလာအသီးကသိမ်းပိုက်သည်။ နာနတ်သီး, သရက်သီး, ကျွဲကောသီးနှင့်ငှက်ပျောသီးအချိုပွဲ၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဟာမော်လ်ဒိုက်စားပွဲအတွက်ရှားပါးအဖြစ်ကြက်သားနှင့်ကြက်ဥ။ ကြက်ယေဘုယျအားအထူးအခါသမယသာပြင်ဆင်ကြ၏။ ဒါပေမယ့်မီးဖိုချောင်မော်လ်ဒိုက်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများနှင့်ပေါင်းစပ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်သောငါး, မပါဘဲမတွေးဝံ့စရာပါပဲ။ လူကြိုက်အများဆုံး, ပြုတ်သောက်သည်နှင့်တူနာငါးခြောက်လှန်းသည်။ ဆန်, အုန်းသီး, ကြက်သွန်, ထုံးဖျော်ရည်နှင့်ငရုတ်သီးနှင့်အတူငါးကျွန်းသူကျွန်း၏အစားအသောက်များတွင်၏အခြေခံသည်။
ကြက်သွန်, ငရုတ်သီးနှင့်အုန်းသီးနှင့်ရောသောက်သည်တူနာငါးကနေဖန်ဆင်းတော်သော "Mas Huni" paste;
ငါးပိုင် "Cooley Borkiba" - အုန်းသီးများ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူပြုတ်ငါးတစ်စပ်ဟင်း;
သုပ်ကြက်သွန် "Fiyya စာတနျက" - ကြက်သွန်ကွင်းနှင့်ထုံးဖျော်ရည်အတွက် marinated အစိမ်းရောင်ငရုတ်သီးငရုတ်ကောင်းပါဝင်ပါသည်ရသောအရှိဆုံးရိုးရှင်းသောအမျိုးသားရေးပန်းကန်,
zucchini အဝါရောင်ဟင်း "Thor Kirugdiyya" - tori ၏စပ်ဟင်းချို (အမျိုးမျိုး zucchini), ဟင်း, ငရုတ်သီးငရုတ်ကောင်းနှင့်နံ့သာအနံ့;
ငါးကိတ်မုန့် "Budge" နှင့်သောက်သည်တူနာငါး, ဂျင်း, ကြက်သွန်နီ, lemongrass နှင့်ငရုတ်သီးတစ်ဦးအဆာနှင့်အတူစာအိတ်နှင့်ဘောလုံး၏ပုံစံအတွက် "GDF";
ဆန် pudding "Handule Bondibay" - အုန်းသီးမုန့်နှင့်အတူပေါ်ပြူလာ Maldivian အချိုပွဲ;
တစ်စာရွက် Betheln ငရုတ်ကောင်းသို့ကွဲပြားခြားနားသောနံ့သာမျိုးနှင့်တကွထုပ် walnut ကွမ်းသီးကနေဖန်ဆင်းတော်ခွံမာသီးအချိုပွဲ "Dhufun" ပါးလွှာရိတ်။
အဆိုပါမော်လ်ဒိုက်၏အမျိုးသားရေးအစားအစာများတွင်အရက်ကိုအလွန်အတင်းကျပ်ဖြစ်ပါသည် - ကသာခရီးသွားဧည့်ရွက်လှေများ, ဟိုတယ်များနှင့်တာဝန်အခမဲ့ဆိုင်များမှာဝယ်ယူနိုင်ပါသည် လေဆိပ် ။ အထူးပါမစ်ရရှိထားသူကိုနိုင်ငံခြားရေးနိုင်ငံသားများသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်၎င်းတို့၏ခန်းထဲမှာအရက်သိုလှောင်ထားနိုင်ပါသည်။
အချိုရည်အများအပြားမျိုး, ဒေသခံနှင့်နိုင်ငံခြားနှစ်ဦးစလုံးထုတ်လုပ်မှုရှိပါတယ်။ ချိုမြိန်သည်စွန်ပလွံ၏ပန်းပွင့်များ၏ decoction - လူကြိုက်အများဆုံးပျော့ paa ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကမှာ အပန်းဖြေကျွန်းများ နှင့် မာလီ (ဟိုတယ်အားလုံးအတွက်ယူဂိုဆလားဗီးယားပါပြီ) ကိုထိပုတ်ပါရေကိုသောက်ရန်အကြံပြုကြသည်မဟုတ်။
အဘယ်အရာကို2ရက်များအတွက်စင်္ကာပူမှာကြည့်ဖို့?
မော်လ်ဒိုက် - တစ်လနေဖြင့်ရာသီဥတု
ဘရူနိုင်း - ဆွဲဆောင်မှုများ
သခွားသီးအဘို့အနွေးအိပ်ရာ - ဘယ်လောက်ကျဆုံးမသလော
စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုက Grand Canyon အ
ငှက်ရဲ့နို့ - စာရွက်
သူမ၏အစ်မ Gigi နှင့်သူမ၏မိဘများနှင့်အတူမွေးနေ့ဆင်နွှဲဖို့အနက်ရောင် sexy စားဆင်ယင်အတွက် Bella Hadid
ပုံစံ "ချည်စွန့်ပစ်" ပြောသော
ဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်ဘို့ Chandelier: ရှေးခယျြဖို့ဘယ်လို?
အစားဘွတ်ဖိနပ်ဘောင်းဘီ၏: Kim Kardashian ကအသစ်တစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းသစ်ကိုမိတ်ဆက်
အမဲသားနှလုံး - ချက်ပြုတ်နည်းများ
စီရော်နယ်ဒို ladylove ၏အခန်းကဏ္ဍကိုများအတွက် "သတ္တုများပုံသွန်း" ကိုပေး၏